ပြည်ထောင်စုကြီးမခွဲထွက်စေလို | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
December 1, 2007, 5:04 pm
တောင်တန်း ပြည်နယ်ဒေသတွေက နအဖ စနစ်အောက်မှာ ခွဲထွက်ချင်ကြတာ အပြစ်မရှိပါ … ။ ပြည်မကြီးက စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ နိုင်ငံရေး အစရှိတဲ့ စနစ်အားလုံး စုတ်ပြတ်သတ်နေရင်တော့ ပြည်နယ်တွေ တိုင်းတွေ အားလုံး ခွဲထွက်ချင်ကြမှာပဲ.. ။ ပြည်မကြီးက တိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီး လမ်းမှန်ပေါ်မှာ ကြိုးစားနေရင်တော့ လူမျိုးရေးဝါဒစွဲသမားကြီးတွေကလွဲရင် အခြားသူတွေက ခွဲထွက်ဖို့အရေး အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး ယောင်လို့တောင် ဘယ်သူမှ စဉ်းစားကြမည်မဟုတ်ပါ .. ။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးတခုပါပဲ၊ ကျနော်တို့အားလုံး ဒီမြေ ပေါ်မှာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေသွားကြရမှာပါ၊ မိုးသက်မုန် တိုင်းကျပြီး လှိုင်းလေတွေကြီးလို့ မြေတဝပ်စာပဲကျန် တော့တာတောင် ခွဲခွာမသွားဘဲ တစ်ကောင်ပေါ်တစ် ကောင်ဆင့်လို့ အမြဲအတူရှိနေခဲ့တဲ့ ပဲခူးမြို့နာရီစင်ကြီး ရှေ့ကဟင်္သာမောင်နှံရဲ့ နားလည်မှု၊သည်းခံမှု မျိုးတွေနဲ့ ပေါ့…။
Comment by ညီလင်းသစ် December 1, 2007 @ 9:20 pm
That is in my thoughts for long time, definitely true and valuable post. May Myanmar be United. 🙂
Comment by paing ye December 2, 2007 @ 3:21 am
Let say…Myanmar is not as big as some of our neighbor countries. People were saying, they want democracy like, United state. Yes, some state in US is bigger than Myanmar. If all the states want become themselves, I am worry other country will attack later.
Comment by Anonymous December 2, 2007 @ 4:15 am
Comment by zee December 2, 2007 @ 7:08 am
Comment by Anonymous December 2, 2007 @ 9:33 am
Comment by * In Search of Truth * December 2, 2007 @ 8:13 pm
We don’t want “One Nation, One Language”
We want to study Our languages, Our cultures in School. But …We don’t haveachance to learn at least asasecond language..
Comment by Anonymous December 3, 2007 @ 11:31 am